Qeybta 1: 3 faraqa u dhaxeeya mts iyo m2ts
Qeybta 2: 3 faraqa u dhaxeeya TS iyo m2ts
Ka hor inta aan qoto dheer dhexgalin mawduuca waxaa aad muhiim u ah in la ogaado in ay jiraan ururo dhawr ah oo u dhexeeya qaabka sakhiray oo aan iyaga u sharaxay suurta gal ma aha in la kala saaro kordhin file in lagu xusay in arrintan la xiriira ka. Marka ay timaado in MTS iyo M2TS markaas waxaa aad muhiim u ah in la ogaado in labada waa kordhin file ee AVCHD qaab sida mid ka mid ah oo loo isticmaalo in ay toogtaan videos camera iyo sawiro in la joogo xasuusta gal tahay. Kordhin file waa weyn oo ku size iyo sabab la mid ah waxaa ay ku taliyaan xirfadlayaasha si loo hubiyo in labada filim waaweyn marnaba toogtay isticmaalaya yar kaadhka xusuusta gudahood Cam ama tiro badan oo sawiro marnaba toogtay arrintan la xiriira sida faylka kororsi ku caburin doonaa kaarka sabab u size iyo resultantly waxay noqon doonaan musuqmaasuq iyo user markaas yeelan doonaan in ay bedesho waa hubaal. Xogta ayaa sidoo kale marnaba soo kabsaday in inta badan xaaladaha la xiriira arrintaas.
Part1: 3 faraqa u dhaxeeya mts iyo m2ts
Qodobka ugu horrayn waxa weeyi in uu yahay in la tixgeliyo in arrintan la xiriira waa in marka videos HD ama sawirrada toogtay la cams ay kordhin waa mts laakiin ujeedooyin diinta marka ay uploaded in software ama barnaamij kasta oo uu soo rakibay u ujeedada ka dibna kordhin ay la beddelo si m2ts oo loo sameeyo by default iyo user uusan lahayn inuu wax ku sameeyo sidii geeddi-socodka waa iswada iyo wixii kaloo la sameeyo sida ugu dhaqsaha badan hanaanka waa la fuliyay.
Farqiga u labaad been in xaqiiqda ah in mts iyo m2ts files yihiin kuwo aad u yar ka duwan. The files m2ts badbaadi karayaan disk Bluray ah taas oo uu leeyahay fidinta ee BDAV iyo mararka qaarkood waxay sidoo kale loo yaqaan AVCHD video oo ay u sabab tahay xaqiiqada ah in m2ts videos iyo qalab kale oo uu soo encoded la kordhiyo isku noqon karaan Decoded iyadoo la isticmaalayo habab dhowr ah sida Dolby AC-3 iyo MP2. Dhammaan xarumaha, kuwaas oo aan meesha joogin ee files mts oo halkan ay sii yar sare marka loo eego faylasha m2ts yihiin.
The file MTS ayaa xal aad u dheer, oo mararka qaarkood user uusan haysan meel ay ku kaydiso faylasha in ay yihiin xitaa dhowr daqiiqo oo dherer ah sida meel bannaan oo ay kaydinta noqon kartaa ka wayn yahay 1GB dhowr GBS iyo sabab la mid ah qaabka ay tani tahay marnaba lagula talinayaa. Marka ay timaado in m2ts files inkastoo ay sidoo kale waa mid aad u ballaaran ee size laakiin files in lagu kaydiyaa la kordhiyo file taasi marnaba qaadan meel sida ugu badan ee mts sameeyo sidaas darteed haddii doorasho waa in la sameeyo markaas m2ts way ka wanaagsan tahay in mts marka la eego keydinta.
Part2: 3 faraqa u dhaxeeya TS iyo m2ts
Marka ay timaado in farqiga u dhexeeya TS iyo m2ts qaab ka dibna waa in la ogaadaa in TS ah qaab waxaa loo cayimay in MPEG -2 qaab oo loo isticmaalo si ay u hubiyaan in qaab la isticmaalo si ay u gudbiyaan xogta foomka of audio, video iyo xogta laftiisa. Waa mid ka mid ah hababka ugu fiican si loo hubiyo in video hoorto qaabab file waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in xogta lagu kaydiyaa ku Bluray saxannada. Dhinaca kale m2ts sida ay lagu tilmaamay ka hor iyo weliba waa kordhin ah in loo isticmaalo in uu kaydiyo xogta on cajaladaha Bluray kaas oo sidoo kale loo yaqaano qaab BDAV oo ay tahay mid aad u ballaaran in size marka loo eego qaab TS.
Durduri TS ama gaadiidka uu leeyahay fikradda ah barnaamijyada iyo barnaamijka sifeeyeen miiska map barnaamijka halkaas oo qiimaha uu leeyahay mid kasta oo PID gaar ah. Webiyaasha oo dhammu waxay ku qoran yihiin hoose in arrintan la xiriira yihiin kuwa ku qoran yihiin ee PID iyo kuwan oo dhan waxaa lagu soo ururiyey in PMT. The m2ts ayaa dhanka kale waxa uu leeyahay fikradda ah Deji xogta wareejisaa cajaladaha Bluray la isticmaalayo nidaamka helaan content sare oo waa mid caadi ah si loo hubiyo in macluumaadka ku saabsan Bluray waxaa marnaba si fudud Decoded. Barnaamijyada taageera faylasha m2ts inta badan ka shaqeeyaan technology taas oo ku salaysan files baraha ama decrypted sidoo.
Taageerada software ah files TS waa mid aad u xadidan oo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in barnaamijyada taageera ciyaaraha file TS waxaa aad u xadidan tirada iyo resultantly aan si fudud looga heli internetka. Haddii mid ka mid ah waxaa markaas helay taageero macaamiisha ah ma aha ilaa ay calaamaddu ku taal. Dhinaca kale sida m2ts waxaa taageeray Bluray iyo qaab AVCHD sidaas darteed waa la aqbalo on qiyaasta weyn marka loo eego qaab TS iyo taageero software ah qaab ama file dheeraad ah si fudud ayaa laga heli karaa internetka. Dhinaca kale waxa ay sidoo kale waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in haddii taageerada halkaas ma joogo ka dibna convertor ugu fiican ee la soo bixi si aad u hesho shaqo sameeyey wax waqti ah gudahood oo dhan.
Si aad u hesho sida ugu fiican ee arrintan la xiriira, waxaa lagula talinayaa in ay toogtaan filimada by in la hubiyo in kaarar la Xusuus weyn waxaa loo isticmaalaa. Marka ay timaado in markaas AVCHD waa technology ah in la soo saaro ee sanadka 2006 by Sony oo Panasonic iyo shirkadaha kale sida Nikon, Canon iyo JVC isticmaalaan qaab file MTS in uu kaydiyo sawirada iyo qaabab kale kaararka xusuusta gudahood. Ayaa qaab MTS ma aha fudud ka oo dhan iyo sabab la mid ah waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in taxadarka in lagu kor ku xusan aan la raacin oo keli ah, laakiin waxaa loo isticmaalaa sida ay tahay in la hubiyo in natiijooyinka in lagu helay waa mid aad ugu fiican arrintan la xiriira. Ka hor inta iibsi user waa in sidoo kale la hubiyo in falanqaynta qaab lagu sameeyo oo kaliya qalab oo la soo iibsaday kaas oo ku haboon baahida.
Sida loo rogo ama faylasha AVCHD in Qaabka ProRes
2 Easy Siyaabaha Beddelaan Dailymotion in MP3
Sida loo Beddelaan ASF in AVI in Windows / Mac
Sida loo Beddelaan MPEG in DVD ee Mac iyo Windows (Windows 8 taageeray)
> Resource > Beddelaan > MTS VS M2TS, TS VS M2TS